अचानक बलिउड अभिनेता अक्षय कुमारको घरमा के भयो ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
अचानक बलिउड अभिनेता अक्षय कुमारको घरमा के भयो ?
बलिउड अभिनेता अक्षय कुमार फिल्म छायाँकनका लागि बेलायतमा थिए । तर यता घरवाट नराम्रो खबर पुगेपछि उनी अचानक फिल्मको काम छोडेर मुम्बई फर्किएका छन् । भारतीय मिडियाका अनुसार उनकी आमा अरुणा भाटियाको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ।
मिडिया रिपोर्टका अनुसार उनी मुम्बईको एक अस्पतालको आईसीयूमा भर्ना छन्। अभिनेता अक्षय कुमार आफ्नी आमालाई भेट्न बेलायतबाट मुम्बई फर्किएका छन्। अक्षय कुमार सोमबार बिहान आफ्नो बिरामी आमा अरुणा भाटियालाई भेट्न बेलायतबाट फर्किएका हुन्।
अक्षयकी आमा हिरानन्दानी अस्पतालमा भर्ना छन्
अक्षय कुमारकी आमा अरुणा भाटिया केही दिनदेखि अस्वस्थ छन् र मुम्बईको हिरानन्दानी अस्पतालको आईसीयूमा भर्ना छन्। यस्तो अवस्थामा अक्षय कुमार युके बाट आफ्नो फिल्म सिन्ड्रेला को छायांकन छोडेर भारत फर्किएका छन्। अक्षय आफ्नी आमा संग धेरै जोडिएको छ। यही कारणले उनले आफ्नो अस्वस्थताको कारण फिल्मको काम बीचमै छोडेर भारत फर्कने निर्णय गरेका हुन्।